के शेयर बजारको बुल/बियरको साइकल तोडिन लागेको हो ? साइकल तोडिदा के फरक पर्छ ? - Facebook Khabar
के शेयर बजारको बुल/बियरको साइकल तोडिन लागेको हो ? साइकल तोडिदा के फरक पर्छ ?
facebook - August 25, 2021 August 25, 2021
शेयर बजारको सुरुवात देखिनै चल्दै आएको बुल र बियरको साइकल तोडिन लागेको सङ्केत शेयर बजारका पुराना लगानीकर्ताहरूले गर्न थालेका छन्।शेयर बजारको पछिल्लो ट्रेन्ड,बढ्दै गएको लगानीकर्ता,प्रयोग हुन थालेको अनलाइन प्रविधि र बढ्दै गएको कारोबार रकमले उक्त साइकल तोडिने सङ्केत गरेको पुराना अनुभवी लगानीकर्ता निर्मल प्रधानले बताए।
“अनलाइन ट्रेडिङ,कोभिडको कारण अरू क्षेत्रमा लगानी गर्ने स्थिति नभएर ४० लाख भन्दा बढी लगानीकर्ता जोडिनु, एकै दिनमा २१ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको कारोबार हुनु,दैनिक औसत कारोबार १० अर्ब भन्दा बढी हुनु,३० अर्बको कारोबार हुने सम्भावना बढ्दै जानु लगायतले साइकलको समय घट्न लागेको अनुभूति मैले गरिराखेको छु” प्रधानले मेरो लगानी सँग भने।
पछिल्लो समयको कारोबारलाई नजिकबाट नियाली रहेका पुराना लगानीकर्ताहरूले समेत आउने दिनमा बजार कता जान्छ भनेर अनुमान गर्न सकिरहेका छैनन्। उनीहरूले पछिल्ला बुलहरूमा सँगालेका अनुभवले यो बुलमा खासै काम गरेको छैन।
अघिल्ला बुलमा जुन किसिमको कारोबार हुने गर्थ्यो त्यो भन्दा निक्कै फरक तरिकाले बजारमा काम हुन थालेको उनीहरूको भनाई छ। त्यसैले पुराना लगानीकर्ताले सोचे जसरी बजार हिँड्नुकाे सट्टा उल्टो बजार हिँडिरहेकोले आउने दिनमा पुराना लगानीकर्ताहरूले मान्दै आएको साइकल तोडिने अनुमान प्रधानले गरेका हुन्।
“अब हामी जस्ता पुराना लगानीकर्ताले लगानी गर्ने सोच र तौर तरिका भन्दा अहिलेको बजारको अवस्था ठ्याक्कै उल्टो भइसकेको अनुभव मैले गर्न थालेको छु। यसैले अब बजारलाई कसैले यसो वा उसो गर्न सक्छु भनेर भन्न सक्ने स्थिति रहेन। बजार नयाँ दिशातर्फ मोडिन थालिसकेको अवस्था छ। मैले भन्दा धेरै शेयर कारोबार गर्ने र मैले भन्दा धेरै ठुलो ऋण लिनेहरूको शेयर बजारमा उदय भइसकेको अवस्था छ। त्यसैले हामी जस्ता पुराना लगानीकर्ताले मान्दै आएको त्यो साइकल पनि अब रहने स्थिति देखिँदैन। त्यसको समय पनि छोटिन्छ जस्तो मैले देखिरहेको छु” प्रधानले भने।
पछिल्लो समय हुन थालेको शेयर कारोबारको भोल्युमलाई हेरेर उनीहरू आश्चर्य चकित हुन थालेका छन्। उनीहरूले सपनामा समेत नचिताएको कारोबार बजारमा हुँदै गर्दा पुराना लगानीकर्ताको मान्यताले निरन्तरता नपाउने उनीहरूले विश्लेषण गर्न थालेका हुन्।
“हामीले पहिलो पटक यसरी अनलाइनबाट २० औँ लाख कित्ता शेयर २० औँ अर्ब भन्दा बढीमा खरिद बिक्री भएको देखिरहेका छौ। यो शेयर बजारको इतिहासमै पहिलो पटक देखिदै छ। यो भन्दा अघि यस्तो किसिमको कारोबार हामीले कहिल्यै देखेका थिएनौ। एकै दिनमा एउटै स्क्रिप्टको १६/१८/२० लाख कित्ता सम्मको कारोबार हुनु भनेको चानचुने कुरा होइन। नेशनल हाइड्रोपावर कम्पनीको मात्रै १८ लाख कित्ता शेयरको कारोबार एकै दिन हुन थालेको छ। नेपाल बैंकको एकै दिनमा एक अर्बको कारोबार भएको त हामीले सपनामा पनि देखेका थिएनौ। अनि यत्रो शेयर खपत गर्ने सक्ने सामर्थ्य बोकी सकेको बजारलाई कसैले बुल र बियरको साइकलमा सीमित पार्न खोज्छ भने उ पनि परास्त हुने सम्भावना देखिदै छ” प्रधानले भने।
तर यसो भन्दै गर्दा बुल र बियर नै नहुने भन्ने विश्लेषण गर्न चाहिँ खाेजिएकाे हाेइन । घट्ने बढ्ने क्रम त बजारमा चल्दै जान्छ। तर पहिले जस्तो केही वर्ष बजार घटेको घटै र बढ्दा बढेको बढै हुने प्रवृत्तिको भने अन्त्य हुन लागेको प्रधानले प्रस्ट पारे। उनका अनुसार बजार केही समय घट्ने र फेरि बढ्ने गर्ने छ। बजारमा एक किसिमको स्थायित्व देखिने छ।जसले सानादेखि ठूला सबै लगानीकर्तालाई यही बजारमा स्थायी कारोबार गर्ने वातावरण सिर्जना गर्ने छ। जुन बजारको लागि राम्रो हुने प्रधानको विश्लेषण छ।
पहिलो पटक यति रमाइलो दोहोरी जम्यो गायिका टिका सानु र गायक खिम अबिरलको , सुरु देखि अत्य सम्म हासो मात्र ( भिडियो सहित )
गायिका मेलिना राई निशान भट्टराई संग सालघारीमा, जसका कारण बजार भरी चल्यो हल्ला